Achi-buuteen Dr. Mararaa Guddinaa ammas hin beekamne - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Achi-buuteen Dr. Mararaa Guddinaa ammas hin beekamne
Garajabeennii fi tankaarfiin hidhaa jumlaa kan agarsiisu Woyyaaneen ammas Oromoo tuffachuu fi daandii badii irra dhaabbachuu filachuu isiiti.
Erga kaleessaa, halkan keessa, humna Agaaziitiin ukkaamfamanii kaasee iddoon Dr.Mararaan geeffaman hanga ammaatti osoo hin beekamin hafeera. Humni Agaazii Dr.Mararaa kan ukkaamse firoota isaa nama sadi wajjiin. Dr. Mararaan eessa akka geeffaman kan agafataman, Prof. Bayyanaa Pheexiroos, ‘hin beeknu’ jedhaniiru.
Dr.Mararaan kan ukkaamfaman guyyaadhuma turtii Awurrooppaa guyyaa 20 xumuranii gara Itoophiyaatti debi’aniidha. Akka tajjabdoonni jedhanitti Dr. Mararaa qarriffaa Woyyaanee keessa kan seensise Paarlaamaa Awurooppaa funduratti dhiyaatanii rakkoo Oromiyaa fi Itoophiyaan yeroo ammaa keessa jirtu irraa dubbachuu fi ibsa laachuu isaaniiti. Ammas Dr. Mararaan hawaasa Oromoo Beeljiyem, Nezerlaand, Jarmanii fi Siwiizerlaand jiraatan waliin dhimma Oromoo irratti marii taasisaa turuun isaaniis Woyyaanee hirriba dhoorguu agarsiisa, tankaarfiin amma Woyyaaneen fudhatte kuni.
Akkuma beekamu woggaa tokkoof Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi hoogganoota Kongiresii Federlaa Oromoo (KFO) kanniin biroos mana hidhaa keessatti duubaan itti cufameetti kan jiran. Kana jechuun hooggansi KFO hundi mana hidhaa jira jechuudha. Kan Woyyaanen itti jirtu tooftaa Oromoo biyya keessaa hoogansa malee hanbisuu fi isa biyya alaa faffacaasuuti. Gama kanaan, hanga tokko itti milkaayaa jirti fakkaata.
Yeroo ammaatti Dr. Mararaa fi Baqqalaa Garbaa dabalatee Oromoo kumaatamatu mana hidhaa keessatti gidiraa hamaa argaa jira. Namoota kumaatama hidhaa fi du’aan dhabaa jirra. Garajabeennii fi tankaarfiin hidhaa jumlaa kan agarsiisu Woyyaaneen ammas Oromoo tuffachuu fi daandii badii irra dhaabbachuu filachuu isiiti. Kan hidhame hiiksisuu, Woyyaaneen akka nutti hin taphanne taasisuu kan dandeennu qabsoo/sochii cimaa qofaan. Hidhamaa kan hidhame hiiksisuu fi qe’ee teenna diina nutti roorrisu irraa tiksuu dirqama ta’a. Kuni hin ta’u taanaan, guyyaa eegganna malee, tokko tokkoon guuraa nu dhabamsiisuuf deemti Woyyaaneen.
Free Dr. Merera Guddinaa! Free Bekele Gerba & all political prisoners!
hidhamuu Dr.Mararaa Guddinaa
Previous articleGammadaa Waariyoo ‘Down Down TPLF!’ Woyyaanee fi Saharaa miliqee Kaayiroo seene
Next articleKomishiniin Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaan Dr. Mararaa hidhuu isii cimsee balaaleffate